सुदूरपश्चिममा ५.७ रे'क्टर स्केलको भू'कम्प ,यस्तो छ ताजा अवस्था ! -
सुदूरपश्चिममा ५.७ रे’क्टर स्केलको भू’कम्प ,यस्तो छ ताजा अवस्था !
३ मंसिर, बझाङ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला बझाङको पौवागढी क्षेत्रलाई केन्द्रवि’न्दु बनाएर मंगलबार साँझ भू’कम्प गएको छ ।
भू’कम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका अनुसार खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने पौवागढी क्षेत्रमा ७ : १५ बजे ५.७ रेक्टर स्केलको भू’कम्प गएको हो ।
भू’कम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका कर्मचारी शारदा ढकालले सुदूरपश्चिमसँगै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भू’कम्पको धक्का महसुस गरिएको जानकारी दिए ।
भू’कम्पबाट के कति क्षति भयो भन्नेबारे एकिन जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन ।